I-Androidsis yiwebhusayithi ye-Intanethi ye-AB. Kule webhusayithi sikhathalele ngokwabelana nazo zonke iindaba malunga ne-Android, ezona zifundo zigqibeleleyo kunye nokuhlalutya ezona mveliso zibalulekileyo kweli candelo lentengiso. Iqela lokubhala lenziwe linomdla malunga nehlabathi le-Android, elijongene nokuxelela zonke iindaba kwicandelo.
Ukusukela oko yasungulwa ngo-2008, i-Androidsis iye yaba yenye yewebhusayithi ekubhekiswa kuyo kwicandelo le-smartphone le-Android.
Iqela lokuhlela le-Androidsis lenziwe liqela le Iingcali zetekhnoloji ye-Android. Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela, unako sithumele le fomu ukuba sibe ngumhleli.
Ndazalelwa e-Barcelona, ​​eSpain, ndazalwa ngo-1971 kwaye ndiyazithanda iikhompyuter kunye nezixhobo eziphathwayo ngokubanzi. Iinkqubo zam endizithandayo zokusebenza zizixhobo zefowuni kunye neLinux yeelaptops kunye neidesktops, nangona ndenza kakuhle kwiMac, Windows, kunye ne-iOS. Yonke into endiyaziyo malunga nezi nkqubo zokusebenza ndizifundile ngendlela endizifundise yona, ndiqokelela ngaphezulu kweminyaka elishumi yamava kwihlabathi lezixhobo ze-Android!
Umbhali kunye nomhleli okhethekileyo kwi-Android kunye nezixhobo zayo, ii-smartphones, ii-smartwatches, ezinxitywayo, nayo yonke into enxulumene ne-geek. Ndangena kwilizwe lobuchwephesha ukusukela ndise mncinane kwaye, ukusukela ngoko, ukwazi ngakumbi nge-Android yonke imihla yenye yezona zinto zam zintle kakhulu.
Ngaphambi kokungena kwimakethi ye-smartphone, bendinethuba lokungena kwihlabathi elimangalisayo lee-PDAs ezilawulwa yiWindows Mobile, kodwa hayi ngaphambi kokuzonwabisa, njengomntu omncinci, ifowuni yam yokuqala ephathekayo, iAlcatel One Touch Easy, iselfowuni esivumele ukuba sitshintshe ibhetri iibhetri zealkali Ngo-2009 ndakhupha i-smartphone yam yokuqala eyayilawulwa yi-Android, ngakumbi iHero Hero, isixhobo endinaso ngothando olukhulu. Ukusukela ngoku, ii-smartphones ezininzi zidlulile ezandleni zam, nangona kunjalo, ukuba kufuneka ndihlale nomenzi namhlanje, ndikhetha iiPixels zikaGoogle.
Ndiqale nge-Android ngeHTC Dream emva ko-2008. Uthando lwam lwazalwa ukusukela ngaloo nyaka, ndineefowuni ezingaphezulu kwama-25 ngale nkqubo yokusebenza. Namhlanje ndifunda ukukhula kwezicelo zeenkqubo ezahlukeneyo, kubandakanya i-Android.
Ifowuni yam yokuqala yayiyi-HTC Diamond apho ndafaka khona i-Android. Ukusukela ngelo xesha ndathandana nenkqubo yokusebenza kukaGoogle. Kwaye, ngelixa ndidibanisa izifundo zam, ndiyonwabele ukuthanda kwam okukhulu: i-mobile telephony.
Ubotshelelwe kwaye uxhonyiwe ukusukela ... uhlala! kunye nehlabathi le-Android nayo yonke indalo engummangaliso eyingqongileyo. Ndiyavavanya, ndihlalutye kwaye ndibhale malunga nee-smartphones kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo ze-Android ezihambelanayo, izixhobo kunye nezixhobo. Ukuzama ukuba "on", funda kwaye ugcine unolwazi ngazo zonke iindaba.
Umthandi wetekhnoloji ngokubanzi kunye ne-Android ngokukodwa. Ndiyakuthanda ukufumanisa ii -apps ezintsha kunye nemidlalo kunye nokwabelana ngamaqhinga nawe. Umhleli iminyaka emihlanu. Ndikwabhala izikhokelo ze-Android, uNcedo nge-Android kunye neQonga leSelfowuni.
Ukuhlalutya zonke iintlobo zezixhobo ze-Android ukusukela ngo-2010. Kubalulekile ukwazi nzulu inkqubela phambili yezobuchwephesha ukuze ukwazi ukuzithumela kubafundi. "Ayisiyiyo yonke into ebaluliweyo, kwii-mobiles kufuneka kubekhona amava" - uCarl Pei.
Ukuvavanya i-Android kususela kwakudala, umdla wam kwinkqubo yokusebenza kaGoogle undikhokelela ekufuneni ukuzama zonke izixhobo endinokuzifikelela. Ndiyathanda ukubathelekisa, ndazi iimpawu zabo ngokweenkcukacha, kwaye ndifumanise yonke into abayinikelayo.
I-Amstrad ivule iingcango zetekhnoloji kum kwaye ke bendibhala nge-Android ngaphezulu kweminyaka esi-8. Ndizithatha njengengcali ye-Android kwaye ndiyakuthanda ukuvavanya izixhobo ezahlukeneyo ezibandakanya le nkqubo yokusebenza.
Ukuhamba, ukubhala, ukufunda kunye nomdlalo bhanyabhanya zizinto endizithandayo, kodwa akukho namnye kubo onokundenza ukuba akukho kwisixhobo se-Android. Ndinomdla kwinkqubo yokusebenza kaGoogle ukusukela oko yaqalwa, ndiyakuthanda ukufunda kunye nokufumanisa okungakumbi ngayo, imihla ngemihla.
UAlfonso de Frutos
Ukudibanisa itekhnoloji entsha kunye nothando lwam lwe-Android, nokwabelana ngolwazi lwam kunye namava malunga nale OS ngelixa ndifumana izinto ezininzi nangakumbi zayo, ngamava endiwathandayo.
Ndiyakuthanda ukuba semgangathweni kubuchwephesha obutsha ngokubanzi nakwi-Android ngokukodwa. Ndinomdla ngokukodwa kunxibelelwano lwayo kunye necandelo lezemfundo kunye nemfundo, ke ndiyakonwabela ukufumanisa ii -apps kunye nokusebenza okutsha kwenkqubo yokusebenza kweGoogle enxulumene necandelo.
Ndiyayithanda i-Android. Ndiyakholelwa ekubeni yonke into elungileyo inokuphuculwa, yiyo loo nto ndichitha ixesha elilungileyo lokufumana ulwazi kunye nokufunda ngale nkqubo yokusebenza. Ke ndiyathemba ukukunceda ugqibelele amava akho ngetekhnoloji ye-Android.
Itekhnoloji ibisoloko indonwabisa, kodwa ukufika kwee-smartphones ze-Android kuye kwandise umdla wam kuyo yonke into eyenzekayo emhlabeni. Ukuphanda, ukwazi nokufumanisa yonke into entsha malunga ne-Android yenye yezinto endizithandayo.
Ngokuthandana ne-Android ekuhambeni kweminyaka isebenzise iinkqubo ezahlukeneyo kunye nee-smartphones. Kuba yathiywa ngegama le-ice cream okanye iziqhamo ezomisiweyo, ndazithembisa ukuba andizukuyishiya i-Android. Ndiyayithanda itekhnoloji kwaye ndigcina zonke iindaba.